UN warra nama godaansisan adabuuf - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Godaantonni Afirkaa karaa Liibiyaa galaana Mediteraaniyaarraan gara Awurooppaa ce'uuf yaalaan rakkaa hamaaf saaxilamu
Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti Manni Maree Nageenyaa, Liibiyaa keessatti warreen karaa seeraan alaa namoota godaansisu jedhaman ja'a irra qoqqobbii kaa'era. Godaansistoonni seeraan alaa qoqqobbii akka addunyaatti jirurratti tarreeffamuun kun isa jalqabaati.
Namoonni adda ba'anii galmee yakkaa kana keessatti heeraman ogganaa garee eegumsa qarqara galaanaa dabalatee lammileen Liibiyaa afuriifi lammileen Ertiraa lama keessatti argamu.
Godaansistoonni seeraan alaa kun tasgabbii Liibiyaa keessatti dhabame akka carraatti fayyadamuun namoota kum dhibbaatamaan lakkaa'aman galaanarraan gara Awurooppaatti godaansisaniiru.
Godaantonni baayyeenis buufata gara garaa keessatii hidhmaniiru/ugguramaniiru, akkasumas godaansistoota seeraan alaa kanaan hedduu reebamaniiru.
Qoqqobbiiwwan kunneen - sadarkaa addunyaatti bakka bakkatti imaluufi qabeenya akka hin sochoofne dhowwudha. Kunis tarkaanfii akka addunyaatti Daachiin deggeramudha. Yaadni tarkaanfii kana fudhachuu jalqaba Caamsaa 1 dhiyaatee garuu Raashiyaadhaan ragaa namoota kanaa walitti qabachuun qorachuu waan barbaadduuf akka turu taasifamee ture.
Tarkaanfiin qoqqobbii kaa'uu kun akka fudhatamuuf ka'umsa kan ta'e gabaasa dhabbanni oduu CNN osoo godaantonni Afirkaa hedduun Liibiyaa keessatta dararamaniifi akka garbaatti gurguramanii dhuma bara 2017 waraabaa gadii lakkise ture.
"Dhuma bara darbee yeroo godaantonni Liibiyaa keessatti garbummaan gurguraman arginee hedduu rifanne. Manni Maree nageenyaas tarkaanfii akka fudhatu dhaadatee ture, " jechuun ibsaan Niikii Haaley Ambaasaddarri Ameerikaa UN keessatti.
"Qoqqobbiin guyyaa arr'aa kun namoota addnuyaa kanarra jiran hunduu akka tokko ta'uudhaan yakkamtoota akkasiifi warreen seeraan ala nama godaansisan itti gaafatamoo taasisan gochuuf ergaa cimaa dabarsa. Addunyaa keenya kanarratti yakka mirga dhala namaa akkasii kanaaf bakki hin jiru," jetti Ambaadarittiin.
Namoota qoqqobbiin irra kaa'ame ja'an keessaa Ermiyaas Girmaay kana jedhamu nama UN'niin sadarkaa Saab-Sahaaraa Afirikaa keessaatti namoota karaa Liibiyaa seeraan ala godaansisuun ga'ee guddaa qaban keessaa isa tokkodha.
Namoonni biroon shanan Fitiwii Abdelraazaaq nama Ertiraa ta'e, Gaggeessaa milishaa Liibiyaa Ahmad Umar al-Dabbashii, Musaab Abuu-Qariin, Lixa Liibiyaatti Ogganaa Riqicha Shuhadaa al Naasr kan Zaawiyyaa keessatti argamuu kan ta'an Mohaammed Kachlaaf fi Dursaa Eegumsa Qarqara Galaana Liibiyaa kan ta'an Abd al Rahman al-Milad.
Godaantota Afirikaarraa gara Awurooppaatti ce'uu barbaadaniif Liibiyaan ulaa baayyee filatamaa ta'aa dhufeera. Biyyattiin erga mootiiin abbaa hirree Maammur Gadaafii aangoorraa fonqolchamanii boooda aad-malummaa/seera-malummaaan baayyateera.
Mudde darbe Gamtaan Afirikaa godaantonni 400,000 hanga 700,000'tti tilmaamaman kaampiiwwan Liibiyaa keessa bakka gara garaa jiran keessaa haala baayyee hamaa ta'e keessa jiru.
Dhaabbanni Godaantota Addunyaa (IOM) bara darbe keessa karaa Liibiyaa galaana Mediteraaniyaanii qaxxaamuranii Awurooppaa ce'uudhaaf yaalaa kan turan keessaa 3,100 ta'an lubbuun darbe galmeesseera.